ikhaya » Okufumaneka » I-Cisco ivula isixazululo seSisombululo seNkcazo yeHlabathi kwi-Intanethi!
I-Cisco ivula isixazululo seSisombululo seNkcazo yeHlabathi kwi-Intanethi!
Izidingo ezifunayo ezivela kubathengi kwi-cable operators kwihlabathi ziye zazisezibonelelo zesebhanti eziza kubakho ukuxhasa izicelo ezintsha ezifana ne-OTT yevidiyo kunye ne-5G. Ngoku, ServerAdmin Namhlanje ushicilele isisombululo se-PHY esikude se-'Infinite Broadband 'esisebenza ngokuzenzekelayo esenza ukuba, ivulekele, iinqununu ezilungelelanisiweyo, kwiinkonzo zokufikelela kwiCare Access! I-PHY kude (RPHY) kunye ne-DOCSIS® I-3.1, imigangatho emibini yeC CableLabs, bonke basebenzisana kunye nokwandisa amandla kwi-HFC izityalo. Ukwakha kwiCisco® I-cBR-8 eguqulelwe i-redband router kunye ne-GS7000 node platforms, i-RPHY ivumela ukunciphisa amandla, ukupholisa kunye ne-site ye-site ye-hub, ukubonelela ngexabiso elipheleleyo leendleko zobunini (TCO). Yona isiseko seCisco kunye nobuchule obupheleleyo beDOCSIS.
Isisombululo esiphezulu somsindo (RPHY), isofthiwe esekelwe kwisimo esilungileyo esivumelekileyo ukuba i-landscape yangaphandle ye-PHY abathengisi beefowuni evumela ukuba umqhubi abakhethe kakuhle izisombululo zabo, ngaphandle kokuvalelwa kwisisombululo esisodwa somthengisi! "I-PHY ekude iyinto entsha enomdla, kwaye njengoko siqhubela phambili ukuguqula inethiwekhi yethu ukubonelela ngeyona nto ibonelela kumakhasimende ethu, sibheke ekujongeni ubuchwephesha njengale nto exhasa injongo yethu yokwakha i-IP-Based based architecture , "U wathi Dr. URobert Howald, umongameli wongameli, ukucwangciswa kwenethiwekhi kwiCode Comcast.
I-RPHY ithunyelwe kubathengi emhlabeni wonke ukususela ngenyanga yokugqibela (ngo-Apreli 2017). Ukuthunyelwa kwe-software ye-RPHY ye-automatisk ye-Cisco isekelwe kwinkqubo yokucwangciswa kwenethiwekhi ye-intanethi (NETCONF) kunye ne-YANG ubuchwepheshe kwaye ibe yiphumo lokulondolozwa okukhulu kwiinkqubo zokubonelela ngezibonelelo ezikhoyo namhlanje. "Siye sabona impumelelo enkulu kwi-platform yethu yeCBR-8 emva kweminyaka emibini nje," wathi USean Welch, umongameli womphathi kunye nomphathi jikelele, iQela leZibonelelo zeNkonzo zeNkonzo, iCisco. "I-RPHY iyona nyathelo elilandelayo ekuziphenduleleni kwi-network yonxibelelwano ye-IP enokukhawuleza, enokutsha, kwaye elula ukusebenza. I-RPHY inikezela isiseko sokuqhubela phambili kwenethiwekhi, njenge-Infinite DOCSIS kunye ne-Cloud Native ubuchwepheshe, okuvumela abathengi bethu ukuba banciphise iindleko ezipheleleyo zobunini, ngelixa begcina amanethiwekhi abo kwi-intanethi kukhuphiswano kwixesha elizayo. "
*I-Cisco iceba ukubonelela ukuhlolwa kwe-interop phakathi kwaba bathengi be-OpenRPD besebenzisa indawo yokuhlola yesithathu. Phakathi kweenkampani ezicwangcisayo ukuthatha inxaxheba ekuvavanyeni yi-VECTOR Technologies, amanethiwekhi ase-BKtel, iTeleste nabanye.
I-Cisco (i-NASDAQ: i-CSCO) inkokeli ye-teknoloji yehlabathi jikelele eyenza i-intanethi isebenze kwi-1984. Abantu bethu, iimveliso kunye nabalingani banceda uluntu ludibanise ngokukhuselekileyo kwaye lubambe amathuba okwenza idijithali namhlanje. Fumanisa ngaphezulu Kwindlu yeendaba.cisco.com Kwaye silandele kwi-Twitter ku @Cisco.
I-Cisco kunye neCisco logo ziyimpawu zokuthengisa okanye iimpawu zokuthengisa ezibhalisiweyo zeCisco kunye / okanye amaqabane abo e-US nakwamanye amazwe. Uludwe lweentengiso zeCisco lunokufumaneka Www.cisco.com/go/trademarks.
Previous: IPARTONI UMongameli kunye ne-CEO u-Elisabetta Cartoni Ekhethwe njengeLungu eliManyeneyo kwi-ASC
next: InfinitySet 3 - eyenzelwe ukudala umonakalo omangalisayo ongathandwayo
Hey Buddy !, Ndiyifumene le ngcaciso: "I-Cisco ivula isixazululo sesisombululo se-Global Network Access Networks". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/cisco-launches-total-solution-for-global-cable-access-networks/. Enkosi.